Antony dimy tokony hotsarainao ho an'ny sekoly tsy miankina
Jereo kely ny antony fototra nisafidianana sekoly tsy miankina
Ny antony handehanana any amin'ny sekoly tsy miankina dia mametraka ny sasany amin'ireo antony malaza amin'ny fijerin'ny ray aman-dreny ny sekoly tsy miankina ho safidy fanabeazana ho an'ny zanany. Ity lisitra ity dia manome antony hafa tokony hijerena ny sekoly tsy miankina. Ity lisitra ity dia mijery lavitra noho ireo antony fototra mahatonga ny ankizy halefanao any amin'ny sekoly tsy miankina, ary misintona antony maromaro mety hahatonga ny sekoly tsy miankina aminao ho mety aminao. Ireto misy antony 5 antony tokony handinihanao ny sekoly tsy miankina.
1. Fiahiana manokana
Ny ankamaroan'ny ray aman-dreny dia maniry ny hahitan'ny ankizy ny fisarihana manokana araka izay tratra. Na izany na tsy izany, dia nandany fotoana be dia be nikarakarana azy ireo ianao fony izy ireo zazakely. Raha azonao atao izany, dia tadiavinao izy ireo mba hahazoana ny fisainana manokana araka izay azo atao amin'ny taona faran'ny mianatra any am-pianarana sy amin'ny ambaratonga voalohany.
Raha alefanao any amin'ny sekoly tsy miankina ny zanakao dia ho any amin'ny kilasy madinika any amin'ny ankamaroan'ny sekoly izy. Ny sekoly tsy miankina dia manana lanjany lehibe ao anatin'ny mpianatra 10-15. Ny sekolin'ny parochial dia manana lanjany lehibe kokoa ao am-pianarana izay matetika dia ao anatin'ny tarika mpianatra 25-25. Amin'ireo karazana mpianatra ambany ireo ho an'ny mpampianatra, ny mpampianatra dia afaka manome ny mpianatra tsirairay ny fiheveran'ny tsirairay izay mendrika azy.
Ny antony iray hafa hiheverana fa ny famaizana dia tsy fahita matetika any amin'ny sekoly tsy miankina. Misy antony roa mahatonga izany: ny ankamaroan'ny mpianatra dia any am-pianarana tsy miankina satria te hianatra izy ireo, ary ny faharoa, ny fitsipi-pitondrantena izay ampiasain'ny sekoly tsy miankina maro, dia ampiharina.
Raha lazaina amin'ny teny hafa, raha misy ny fanitsakitsahana na ny fanapahana ny fitsipika, dia mety hisy vokany izany, ary mety ho tafiditra amin'izany ny fandroahana.
2. Fidirana amin'ny maha-ray aman-dreny
Ny sekoly tsy miankina dia miandry ny ray aman-dreny handray anjara mavitrika amin'ny fanabeazana ny zanany. Ny fiheverana ny fiaraha-miasa telo dia lafiny iray manan-danja amin'ny fomba ampiasain'ny ankamaroan'ny sekoly.
Mazava ho azy fa mety ho betsaka ny fandraisan'anjara sy ny fandraisana anjara raha toa ka manan-janaka ianao any amin'ny kilasy antitra na sekoly ambaratonga fototra raha oharina amin'ny hoe ray aman-drenin'ny ankizy any an -tsekoly .
Karazana firoboroboan'ny ray aman - dreny inona no resahintsika? Miankina aminao sy ny habetsahan'ny fotoana ahafahanao manolo-tena hanampy. Miankina amin'ny talenta sy traikefa anananao koa izany. Ny zavatra manan-danja tokony hatao dia ny mijery sy mahita izay azonao atao. Raha mila mpitantana ny talentany ny sekoly mba handrafetana ny varotra isan-taona, dia ampio ny mpikambana ao amin'ny komity mandritra ny herintaona na roa taona alohan'ny hanolorana izany andraikitra lehibe izany. Raha manontany anao ny mpampianatra vavy anao mba hanampy ny mpitaingin-tsoavaly amin'ny dia iray, dia fotoana iray hanehoana ny mpilalao ekipa mahay anao.
3. Fianarana Akademia
Ny ankamaroan'ny sekoly tsy miankina dia tsy mila mampianatra amin'ny fitsapana. Vokatr'izany dia afaka mifantoka amin'ny fampianarany ny fomba fiheviny ny zanakao, fa tsy mampianatra azy izay tokony hieritreritra. Izany no foto-kevitra manan-danja azonao. Ao amin'ny sekolim-panjakana maro dia mety ho kely ny vola ho an'ny sekoly, ny tebiteby mivaivay, ary ny mety hahaizan'ny mpampianatra tsinontsinona ny mpampianatra.
Ny sekoly tsy miankina dia tsy manana ireo fanerena amin'ny fandraisana andraikitra ampahibemaso.
Izy ireo dia tsy maintsy mihaona na mihoatra ny fandaharam-pianarana avy amin'ny fanjakana sy ny fepetra takiana amin'ny ambaratonga voalohany. Nefa tompon'andraikitra amin'ny mpanjifany izy ireo. Raha toa ka tsy mahatratra ny vokatra tadiavina ny sekoly dia hahita sekoly iray ny ray aman-dreny.
Satria kely ny kilasin'ny sekoly tsy miankina, ny zanakao dia tsy afaka miafina ao ambadiky ny kilasy. Raha tsy azony ny hevitry ny matematika, dia ho hitan'ny mpampianatra fa tena haingana ilay izy. Azony atao ny mamaly an'io olana io amin'ny fianarana, fa tsy herinandro na volana maromaro mba hamahana azy io.
Maro ireo sekoly mampiasa fomba fijery mitaona amin'ny mpampianatra mba hahafantaran'ny mpianatra fa mahaliana sy feno fahafahana ny fianarana. Satria ny sekoly tsy miankina dia manolotra karazam-pampianarana sy fomba fanao isan-karazany manomboka amin'ny fomba nentim-paharazana indrindra ho an'ny fandrosoana, dia ny hifidiananao ny sekoly izay manana filaminana sy filôzôfia mifanaraka amin'ny tanjonao sy ny tanjonao manokana.
Ny tsara indrindra dia ny tianao hahaizan'ny zanakao fandaharam-pandanjalanjana any am-pianarana. Ny programa voalanjalanja dia azo faritana ho toy ny akademia mitovy, fanatanjahan-tena ary asa atao ivelan'ny fandaharam-pianarana. Ny ankamaroan'ny sekoly tsy miankina manandrana manatratra izany karazana programa voalanjalanja izany. Any amin'ny sekoly tsy miankina dia mandray anjara amin'ny fanatanjahantena ny rehetra. Ny alarobia amin'ny sekoly maro dia andro sy tapany amin'ny kilasy ofisialy ary ny antsasaky ny fanatanjahan-tena. Ao amin'ny sekolin'ny fiaramanidina sasany, misy ny kilasy amin'ny asabotsy maraina, aorian'izay ny olona rehetra dia misolo tena amin'ny fanatanjahantena. Ny sekolin'ny lisea tsy manao fianarana asabotsy dia matetika mitaky fitakiana ara-panatanjahan-tena amin'ny asabotsy, matetika lalao
Ny fandaharanasa fanatanjahan-tena sy ny fitaovam-pandanjana dia tsy mitovy amin'ny fianarana any am-pianarana Ny sasany amin'ireo sekoly fiantsenan'ny fiaraha-monina dia manana fandaharanasa fanatanjahan-tena sy fitaovana izay tsara kokoa noho ireo any amin'ny oniversite sy oniversite maro. Na inona na inona sahanin'ny programa fanatanjahantena amin'ny sekoly, ny tena zava-dehibe dia ny fangatahan'ny ankizy tsirairay handray anjara amin'ny asan'ny atleta.
Ny asa aman-draharaha ivelan'ny fandaharam-pianarana dia ampahany fahatelo amin'ny programa voalanjalanja. Tahaka ny fanatanjahan-tena tsy maintsy atao, ny mpianatra dia tsy maintsy mandray anjara amin'ny hetsika ivelan'ny fandaharam-pianarana.
Rehefa manomboka mijery tranokalan'ny sekoly ianao, dia avereno dinihina ny hetsika ara-panatanjahan-tena sy ny fandaharam-pianarana, rehefa mandinika ny fandaharam-pampianarana akademika ianao. Ataovy azo antoka fa hihaona tsara ny zavatra tiany sy ilain'ny zanakao. Tokony hanamarika koa ianao fa ny fanatanjahan-tena ivelan'ny fianarana sy ny ankamaroan'ny asa aman-draharaha dia ampiantsoroana na manara-maso ny mambra fakan-tahaka. Izany dia ampahany amin'ny famaritana ny asa any amin'ny sekoly tsy miankina.
Jereo ny mpampianatra matematika mampiofana ny ekipa baolina kitra ary mizara ny filalaovan'ny fanatanjahantena izay anananao, tsara, izay mahatonga ny fahatsapana goavana amin'ny tovolahy iray. Ao amin'ny sekoly tsy miankina, ny mpampianatra dia manana fahafahana ny ho ohatra amin'ny zavatra maro.
5. Fampianarana ara-pivavahana
Ny sekolim-panjakana dia tokony hitazona ny fivavahana hiala ny efitrano fianarana. Ny sekoly tsy miankina dia afaka mampianatra fivavahana na tsy miraharaha izany araka ny iraka sy filôzôfian'ny sekoly manokana. Raha lôtianina mpivavaka be ianao, dia misy sekolim-panjakana an-jatony maro sy lozisialy izay tsy hajaina fotsiny ny zavatra inoanao sy ny zavatra ataonao Loteranina fa hampianarina isan'andro. Toy izany koa ny amin'ireo antokom-pivavahana hafa rehetra. Ny zavatra rehetra tokony hataonao dia ny mahita sekoly iray izay mahafeno ny zavatra ilainao.
Inona ny SSAT Tsara sa ISEE Score?
Sekoly mitandro ny tontolo iainana
Famaritana ny tsy fisian'ny Atheism
Mpianatry ny Mpanjaka Cleopatra
Tatitra haingana any amin'ny faritanin'i Québec
Ny Bugs You Eat Every Day
Famaritana sy Ohatra tsy voafaritra
Fanehoan-kevitra frantsay amin'ny Pain
Ny fomba hanomezana loka ny NASCAR
Teny nalaina tamin'ny volana Aprily avy amin'ny mpanoratra lehibe
Ny taom-panafarana Sophomore sy ny adiresy ambaratonga faharoa: Timeline
Ny fanamarihana ny rakitsoratry ny British Open
"The Jungle Book" Teny nalaina
Ny History of the Band-Aid
Tantara noforonina sy angano
Fepetra momba ny kolejy amin'ny datin'ny volana novambra
Ireo mpitsoa-ponenana mahafinaritra 20 mahagaga indrindra
Anatin'ny kodiarana 101: Structure
Ny Epidemie Cholera tamin'ny taona 1832
Boky momba ny Higgs Boson
Ny Fiangonana Mainty: Ny fiantraikany amin'ny kolontsain'ny mainty hoditra
Grammar Structural Phrase
6 Best Stations Pandora amin'ny fianarana